Topnews:-Madaxweyne Garguurte oo dhaar ku maray inuu laba qabiil gumeeyo?- Imaam Maskiina oo la eryay
05 March 2013 Waagacusub.com-Beelaha Sacad Habargidir iyo Agoonyar Harti Abgaal ayaa shirar hoosaadyo xasaasiya ku leh Muqdisho iyo Nairobi kadib markii Madaxweyne Hassan Mohamud Alasow eryay dhamaan shaqaalahii Villa Somalia ee labadaas beel u dhashay. Shaqsiyaadkii ugu shaqada badnaa Madaxtooyadda uguna dambeeyay ee Madaxweyne Hassan ka eryay shaqadoodii Villa Somalia waxaa ka mida 42 qof oo ku abtirsada Beelaha Sacad iyo Agoonyar ayna ka mid yihiin Shariif Dheere iyo Mukhtaar Dheere oo u dhashay Agoonyar Gaabane iyo Cabdi Kariim Khaliif oo beesha Sacad u dhashay,waxayna sedexda aan magacyadooda xusnay qaabilsanaayeen Baratakoolka.
Farah Topaz iyo Hassan Garguurte Waxay eryeen Imaamkii Masjidka Shuhadaa ee Madaxtooyadda Macalin Abdirahman Yaraani oo ahaa wadaad Reer Boondhere ah una dhashay Beesha Jareerr wayne waxaana lagu bedelay imaamka Cumar daahir oo ah wadaad ku jira Dam Jadiid iyo PDP.
Masjidka Madaxtooyadda ee loogu magacdaray Shuhadaa waxaa dhisay Madaxweynahii hore Shariif Sheekh Ahmed ,waxaana Iimaamkii Masjidkaas iyo Mu''adamkii Sheekh Muxyadiin labadaba loo eryay inuu Beeydka alle u dhiibay Shariif Sheekh Ahmed .
Dadka la shaqeeya Madaxweyne Hassan Alasow ayaa ku xog waramay inuu Sacad iyo Agoonyar uga cabsi qabo Kursigiisa sidaas darteed uu go-aansaday inuu shaqo ka fadhiisin ku sameeyo .
"Sacad meel ii dhig maxaa yeelay naguma laha saameen badan ,dagaalkeena ugu weyn maanta waa Aala Sheekh iyo Agoonyar uu Shariif Sheekh Ahmed ku beeray Xarumaha Dowladda sida Madaxtooyada ,waa erinay kuligood,waxaa ii dhiman Abdiraxiim Ciise Cadow oo ah Agaasimaha Radio Muqdisho isagana markaan safarkeeyga dibadda ka soo laabtaan dibadda dhigayaa" ayuu yiri Madaxweyne Hassan oo la hadlayay Odayaal u dhashay beeshiisa oo weydiiyay sababta uu shaqada uga fariisiyay shaqaalaha labadaas beelood.
Madaxweyne Hassan wuxuu labada beel uga cabsi qabaa inay kursiga ku qabsadaan sidaas darteed ayuu dagaal ugu jiraa inuu ilkaha siibo.
Inkastoo Madaxweyne Garguurte uu fuliyay dhaartii Wasiir Farah Topaz ku dhaartay inaysan Madaxtooyadda joogi doonin qof la raasa Shariif Sheekh Ahmed ama ka tirsan Xisbigiisa Aala Sheekh hadana waxay Sacad iyo Agoonyar aad uga caroodeen Isir naceyb si gaara loogu ugaarsaday dadka labadaas beel.
Madaxweyne Hassan waxaa la taliya shaqsiyaad ka waaya aragsan oo Kenyaati iyo Ethiopian u badan ,waxaana la rumeeysan yahay inay qorshaha shaqada looga eryaa shaqaalaha labada beel iyaga dejiyeen.